Jooji Siigada hadii kalse cudur ka qaadee | Arrimaha Bulshada
Home News Xogwaran Jooji Siigada hadii kalse cudur ka qaadee
Jooji Siigada hadii kalse cudur ka qaadee
Thursday, July 20, 2017 News , Xogwaran
Bulsha:- Talada Koowaad: Waxaan kula talinayaa dhallinta marka hore inay akhristaan oo ay fahmaan cilmibaadhis yada iyo daraasadaha kala duwan ee maadadan laga suubiyey, waliba waa inay si wanaagsan u dhuuxaan nuxurka, xikmadda iyo murtida, dabadeed ay xisaab la galaan nafahooda, iyagoo runta u sheegaya oo fahamsiinaya duruuftooda & dareen kooda.
Talada Labaad: Waalidiinta Soomaaliyeed ee qiimaha badan waxaan ka codsanayaa inay dhallinyarta u fudaydiyaan inay degdeg u guursadaan, guurkana ka dhigaan mid guul ah oo la fahmi karo oo la jaanqaadi kara duruufta nololeed ee waayaha iyo garaadkooda. 5000 oo Dollar oo ilmahaaga jaamacad kaga bixiso asagoo la nool kacsi badan, oo sinno ama siigo inuu ku dhaco khatar ugu jira, waxaa ka khayr badan adoo intaas ugu guuriya.
Talada Saddexaad: Ciddii aan awoodin inay guursadaan waxaan kula talinayaa inay awooddooda ku bixiyaan meelo kale oon ahayn Siigada. Waxaan dhallinta ka codsanayaa inay akhristaan maqaallada afarta qormo ka kooban een ugu magac-daray “Aragtida Doobnimada iyo Aragtida Guurka” siiba qormada saddexaad oon uga hadlay habab ka kala duwan ee awoodda loo xakamayn karo. Raac linkigan oo guji.
Talada Afraad: Waxaan ku talinayaa in dhallintu ay cilmiga bartaan siiba diinta, iyo maadiga wixii nafci leh, si taas lamid ahna ay daraasadeeyaan dhaqan keena wanaagsan ee aynu leennahay. Waxaan ku talinaya in dhallinta maadadaas samaysa ay saaxiibadooda aan wanaagsanayn beddelaan, sidoo kale, in qofku qalbigiisa iyo maankiisa ku mashquuliyo sida: shaqo, waxbarasho, jimicsi, cibaado iyo dad uu la sheekeysto sida, kuwa isla deegaan ka ay yihiin, ama warbaahinta bulshada,
Talada Shanaad: Inuusan daawan aflaamta galmada ee xaaraanta ah, iyo sawirada qaaqaawan. Sidoo kale, inuusan xidhan dhar jilicsan oo xubintiisa ku lismaya ama uu iska badin cuntada nafaqada leh, inuu ka fogaado is dhexgalka ragga iyo dumarka, inuu jiifsan isagoon hurdo haynin si uusan galmo ugu fekerin oo u siigaysan, iyo inuu go’aan adag ka qaato oo ka dhabeeyo. Dhammaan intaasoo dhan waan ku talinayaa.